Ku Samee Fiidyow Waqti Qaali ah Fashilid Sawir Qaadasho Waqti Dheer | Waxaan ka socdaa mac
Sawirka gudahiisa waxaan ka heli karnaa takhasusyo kala duwan, sida sawir dhaqaaq, sawir habeenkii, sawir isboorti, waqti gaabis ... Sawirqaade kasta wuxuu caadi ahaan ku takhasusay mid ka mid ah qeybahan, inkasta oo aanu si gaar ah u ahayn. Waqtiga sawir qaadashada ayaa badanaa loo adeegsadaa in lagu arko horumarka shayga waqti kadib, hadey tahay shay animated (in kasta oo si aad u gaabis ah) ama shey aan nooleyn oo ay tahay inaan dhaqaaqno.
Noocyada sawirada ah waxay had iyo jeer leeyihiin ujeedada ka mid noqoshada mar dambe, si loo abuuro fiidiyoow guud ahaan waxay na siisaa natiijooyin cajiiba, maaddaama ay caadiyan ina tusayso dhaqdhaqaaqyo gaabis ku ah waqtiga oo ku dhaca dhowr ilbiriqsiyo ah, sida duufaan xiddigo ah, ubax dhalashada, dhaqdhaqaaqa qorraxda ama dayaxa, koritaanka hirarka ... tusaalooyin ka bixi.
Ku qaadashada saacado badan kamaradda horteeda, xitaa haddii santuuqa lagu diyaariyo wakhti go'an, maahan xaalad raaxo leh, maaddaama ay tahay inaan ka warqabno kaameradda marwalba haddii ay dhacdo in wax uun ay dhacaan mar uun. Laakiin waxa run ahaantii fudud, waa in lagu biiro dhammaan sawirada aan qabanay si loo abuuro fiidiyoow guud ahaan, kaas oo na tusaya dhaqdhaqaaq degdeg ah, ama xawaaraha aan dejinno, isbeddelka shayga ama walxaha waqtiga ku jira.
Si loo sameeyo fiidiyowyadan noocan ah ee ugu dambeeya, markii aan tafatirno dhammaan sawirrada, haddii loo baahdo (nidaam saacado badan qaata oo ay ugu wacan tahay sawirro badan oo la doonayo in wax laga beddelo) waxaan isticmaali karnaa Codsiga Waqtiga Sawirka Sawirka, codsi aad u fudud, oo noo ogolaanaya inaan ku soo biirno dhammaan sawirrada feyl ku jira qaab MOV, MP4 ama GIF ah, haddii aan dooneyno inaan natiijada la wadaagno, annaga oo aan faahfaahin badan ka helin, shabakadaha bulshada. Codsigani wuxuu leeyahay qiimo joogto ah Mac App Store oo ah 2,29 euro, laakiin wakhti xaddidan ayaan ku soo dejisan karnaa bilaash adoo adeegsanaya xiriirka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Abuur fiidiyow Waqti-dheeri ah oo weyn oo leh Sawir-qaadasho Waqtiga-gaaban
Kuwani waa fursadaha cusbooneysiinta ee iMac Pro mar la kala daadiyay